Global Tank Isitsha e 2017 - China Yangzhong Luck Star ukubekwa uphawu
I global ithangi esitsheni imikhumbi sicuketse tinhlobo ithangi kuhlanganise amathangi ngoba uketshezi, amagesi kuncibilike, izimpushana, ushintshanise amathangi kanye Okukhethekile. Kwabonakala izimoto ezinkulu zamasosha ngezansi 20ft obuphelele njengalezo evamile umkhakha sogu lolwandle uwoyela akufakiwe kulolu Survey. Gilazi ithangi kuyinto ngokomthetho kakhulu futhi kuyadingeka ukuze sihlangabezane nezindinganiso elawula wokusebenza, kuhlanganise lomthetho wokuhlola ngezikhathi kanye nokuvuselela ukuhlolwa isitifiketi. Nokho, akukho irejista global of tank iziqukathi. Idatha kumele kuqoqwe by ehlelekile ucela abanikazi ithangi kanye opharetha ukunikeza inkampani imikhumbi izinombolo kanye abakhiqizi ukubika ukukhiqizwa entsha. Kuphi idatha ngokuqinile singanikezwanga, lokhu Survey inikeza ukulinganisela ngako okusekelwe ocwaningweni lwe-inthanethi kanye nokubonisana nabameleli umkhakha abanolwazi. izibalo Kubikwe elotshiwe njengoba wathola noma, esimweni amashadi ngaphakathi kombiko, umphumela iphesenti ukubala idatha. It akuhloselwe ukuba basikisele ukuthi izibalo ibalwa kuqondile ukuba nenani eliqondile lazo. Abafundi kufanele wokuqoqa, noma phansi, njengoba kudingeka.
Kuqashisiwe imikhumbi Ukufakwa ohlwini kungukuthi kufakwe Imininingwane umkhakha imikhumbi izibalo, ngaphandle esitokisini abambalwa Kulinganiselwa ukuthi lutho. Ibhalansi ye "ku ukuqasha" amathangi ngokuvamile kulinganiselwa ukuthi yaqashiswa ukuba opharetha (65%) kanye keli kanye nabanye abasebenzisi tank (35%). Lokhu iphesenti ingahluka by amanga inkampani ngokuvumelana emakethe yabo emandla kanye nezinhloso, kodwa yisilinganiso ezilinganisiwe. Lo mkhuba ingxenye enkulu yaqashiswa ukuba opharetha kodwa nokungaguquki survey odlule ukuwohloka iphesenti uhlala ingashintshiwe.
Nakuba kunomkhuba outsource ithangi Logistics ukuze tank opharetha, kusele lwemikhumbi amathangi silawulwa ngokuqondile keli nabanye. Ukuhanjiswa (okubhekiselwa kuzo nangokuthi abakhiqizi noma consignors) Iviyo nabanye inselele ukuhlola ngenxa amaningi keli nabanye emhlabeni wonke. Kuba nzima nakakhulu ukuba ahlanganise uhlu shipper enganyelwe ithangi iziqukathi, ngoba ubunikazi ithangi iyingxenye elincani ibhizinisi labo core futhi - ngenxa - imikhumbi izibalo azitholakali ngokukhululekile. Lokhu kusebenza futhi abanye abasebenzisi tank - ezifana lokuthumela imigqa, kubaphathi bamasosha, ojantshi, zikawoyela, embonini yezimayini kanye China yasekhaya. Kulinganiselwa ukuthi
"Abanye" Imininingwane zifakwe Survey.
Ngenxa yalokho mkhuba outsource ithangi Logistics kulinganiselwa ukuthi shipper nabanye ephethwe imikhumbi awandi. Opharetha angase sihlinzeke izinhlelo Logistics for amathangi shipper eziphethwe, kodwa amathangi akufakiwe njengoba opharetha amathangi ngenjongo lolucwaningo. Kulinganiselwa ukuthi ngokwesilinganiso cishe 35% wezindleko inkampani Leasing liphuthuma yaqashiswa ngqo keli nabanye. Ngo-2013 Survey kwakulinganiselwa ukuthi abantu abangamaphesenti keli futhi abanye bangase ngumnikazi, ngokwesilinganiso, mayelana inani elifanayo amathangi ukuthi yaqashiswa ku imikhumbi yabo. Le nombolo uhlala ezingaguquliwe 2016 Survey futhi eminyakeni eyandulele. Abasebenzisi Survey ungenza izinguquko ukuze ivumelane izidingo zabo. Eminye imininingwane nendlela anikwa nokuchazwa ohambisana amathebula nezibalo.
isikhathi Iposi: May-28-2018